IChina - ALinks
Ungawufumana njani umsebenzi eTshayina?
January 10, 2022 IShubham Sharma iTshayina, imisebenzi
I-China, lelona lizwe linabantu abaninzi emhlabeni neyaziwa njengelinye lawona mazwe anoqoqosho olukhulu emhlabeni. Ukuza kuqoqosho lwase China, kuyakhula minyaka le. Ikwabangela ukudala uninzi lwemisebenzi eboniswayo
Uyifumana njani imisebenzi eBeijing?
Ngamana 28, 2021 UAntika Kumari iTshayina, imisebenzi
I-Beijing ikomkhulu lase China kwaye, ngokungathandabuzekiyo, isixeko esine-plethora yamathemba obuchwephesha kubo bobabini abemi kunye nabaphuma ngaphambili. Thatha ixesha lokufunda malunga nentengiso yengqesho yesixeko kunye neendlela ezinokubakho ngaphambi kokuba uye eBeijing kwaye uqale
Septemba 16, 2020 UAntika Kumari iTshayina, ivisa
Ngelixa ufaka isicelo se-visa esiya e-China, kukho amanye amanyathelo ekufuneka uwalandele. Okona kubaluleke kakhulu, kuya kukunceda ukuba unepasipoti efanelekileyo yokufaka isicelo se-visa. Kukho ifom yesicelo ekufuneka uyenzile
Iindleko zokuhamba ziye eTshayina
Aprili 21, 2020 IShubham Sharma iTshayina, hamba
I-China lelona lizwe linabantu abaninzi emhlabeni kwaye ikwi-Mpuma ye-Asia. I-China inezinye zeendawo ezifudumeza iintliziyo emhlabeni wonke ekufuneka zibonwe ngumntu wonke kube kanye ebomini babo. Ukuza kokutya oza kukufumana
Makhe sihlolisise i-China enomdla ngexesha layo elifanelekileyo
Aprili 2, 2020 UKaruna Chandna iTshayina, hamba
ELONA XESHA LOKUHAMBELA UKUHAMBA ETSHAYINA China indawo yokujikeleza unyaka wonke. Nokuba uhamba nini, kuhlala kukho indawo ekufanele ukuba uyindwendwele. Imozulu ngobulumko, elona xesha lilungileyo lokundwendwela iChina yintwasahlobo (Epreli-Meyi) nasekwindla (Septemba-Okthobha), xa uninzi lwayo